Kitra – Filaharan’ny Fifa : nilatsaka faha-103 ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra – Filaharan’ny Fifa : nilatsaka faha-103 ny Barea de Madagascar
Tsy tafiditra ao anaty “Top 100” intsony ny Barea de Madagascar fa nivarina eo amin’ny filaharan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Ankehitriny, any amin’ny faha-103 indray no misy ny ekipam-pirenena malagasy.
Namoaka ny filaharan’ireo firenena mpikambana ao aminy, omaly alatsinainy 16 oktobra, ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa). Very toerana roa indray ny Barea de Madagascar. Raha faha-101 no nisy azy, iray volana lasa izay, lasa faha-103 indray ny ekipam-pirenena malagasy, ankehitriny.
Eo amin’ny faha-26 indray kosa anefa ny Barea de Madagascar, raha ho an’ny eto Afrika. Marihina fa mbola ny Mannschaft, ekipam-pirenen’i Alemaina, hatrany ny eo amin’ny laharana voalohany eran-tany, arahin’i Brezila ary mamarana ny lampihazo i CR7 sy i Portugal. Fahefatra kosa i Messi sy ny Albiceleste Arzantina.
Manomboka mahazo toerana ihany koa ny Frantsay, izay tafiditra ao anaty “Top 10” satria mitana ny laharana fahafito ry zareo, amin’izao fotoana izao. Faha-65 ny Rosianina, izay hampiantrano ny “Mondial 2018”.
Tsiahivina fa faha-32 i Sénégal, izay hifanandrina amin’ny Barea de Madagascar eo amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019). Fihaonana, hotanterahina ny 17 marsa 2018, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Voalohany amin’ny Afrikanina ry zareo Tonizianina, izay eo amin’ny faha-28, arahin’ny Faraonan’i Egypta, faha-30.
Mbola, voalohany aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina kosa ny Barea de Madagascar. Any aoriany avokoa mantsy i Maorisy, izay faha-158 ary faha-156 i Maldives, raha faha-188 i Seychelles. Mitana ny laharana faha-127 kosa i Kaomoro. Ry zareo Kaomorianina, izay hanao lalao ara-pirahalahiana amin’ny Barea de Madagascar ihany koa, ny volana novambra ho avy izao. Fihaonana, hotanterahina any Paris, Renivohitr’i Frantsa. Mbola mitana ny laharana faha-206 farany ry zareo Tonga.